Iyo yakawanda-yakatenderedzwa okroshka - nhoroondo, mabhenefiti, mabikirwo
Kana kupisa kwezhizha kuri kunze uye husimbe hwekushandisa nguva mukicheni, unogona kuenda kubindu, unotora makomichi mashoma anotonhorera, radishes matsva, sarudza magidhi ekutanga: minhenga yeeiii diki, dhiri, parsley, siraira uye zvese izvo inosvika - iwe haugone kukanganisa, iyo yakawanda greenery iripo, zvirinani.
Zvese zvakaunganidzwa zvinofanirwa kushambidzwa, zvakapwanyika zvakapwanyika, zvakasaswa nemunyu, zvakazadzwa neyakagadzirwa kvass uye, voila, iyo yakapusa okroshka yakagadzirira.Iyo inogutsa zvakakwana nzara nenyota pazuva rezhizha uye haidi zvinodziya zvinopisa zvekudya.
Sezvauri kuona kubva kune ino yekubheka, okroshka ine zvinhu zviviri - akachekwa miriwo nemiriwo, iyo mumazuva ekare yainzi krochevo, uye chigadziko chemvura, mune yakasarudzika vhezheni yacho kvass. Hazvina kuoma zvachose, handizvo here? Chero chero muenzi wevaenzi anogona kubata ndiro yakadaro.
Asi okroshka zvakare ine zvakavanzika zvayo, pasina izvi zvingadai zvisina kuve yakanakisa dhishi rekudyira izvo zvichashamisa vashanyi vekunze. Ngatitaurei nezve zvese zvakadzama.
Chii krochevo chakagadzirwa
Mazhinji magidhi, hafu yacho inofanira kuve yakasvibirira hanyanisi. Vamwe vanoisa chete minhenga yakasvibira muokroshka, vamwe vanocheka mashanga machena eiii mairi.
Kugamuchira kwekudya... Usati waiwedzera kune crumb, zvinokurudzirwa kupisa magidhi akachekwa zvishoma nekupwanya kwehuni pamwe chete nemunyu, kana kungoisa zvinyoronyoro nemaoko ako uye rega imire kwekanguva kuitira kuti ibudise muto uye ive tastier uye zvimwe zvinonhuwirira.
Kune okroshka, zviri nani kutora saradhi, ine ganda rakatsetseka, asi mukusavapo kwavo, iwo mapundu akave akakodzera. Iwe unongoda kuedza usati watema, kunyangwe ivo vari kuvava. Dzimwe nguva makomichi ane munyu uye akasanganiswa anotemwa muokroshka.
Nyowani uye muto nerinofadza ruvara uye inonaka kuravira, inozoshongedza chero okroshka.
Ehezve, iwe uchafanirwa kunamira navo kune okroshka. Kutanga, ivo vanofanirwa kuve akaomeswa-akaomeswa: isa mupani ine mvura inotonhorera, uuye kumota uye ugare pane yakaderera kupisa kwemaminetsi 6-8. Sukurudza nemvura inotonhorera, inotonhorera uye wozogeza.
Mazai anotonhorera anogona kungochekwa uye kuwedzerwa muchimedu.
Kugamuchira kwekudya... Kana iwe unogona kushandura kunhuvira kwedhishi nekukwiza maini emazai akaomeswa-masheya nemasitadhi uye muto wemonimu uye nekuwedzera yakati wandei shuga. Gadzira zvakanaka mapuroteni akasara nebanga.
Zvichaita kuti chikafu chako chigutsikane uye chinosiyana zvakanyanya kuravira kwesobho yezhizha. Mune okroshka kune nyama yakakangwa uye yakabikwa, kusvuta huku gumbo, ham, yakabikwa uye yakasviba-sosiji, yakabikwa offal (moyo, mapapu). Okroshka nerurimi rwemombe inoonekwa seinonaka, uye vamwe vanowedzera bhekoni rakapwanyika mairi. Iwe unogona kuunganidza zvasara zvezvigadzirwa zve nyama zvakasara mufiriji uye woita okroshka nekucheka kutonhora. Iwe unogona kunyora kwenguva yakareba - iyo chiyero chekufungidzira haina muganho.
Kugamuchira zvekudya. Mumazuva ekare, nyama yakatemwa yeokroshka yakasanganiswa ne grated horseradish uye yaibvumidzwa kupomhodza kuitira kuti nyama igozadzwa nekunhuhwirira kwakanaka.
Iyo yekubheka yeokroshka nehove ikozvino yave kutokanganwa, yaishandisa tumapundu twemvura yakabikwa hove - pike perch, pink salmon, trout, tench. Asi iyo piki yaifungidzirwa senge yakanakira okroshka, iyo yakanga isina hove yakasimba nemweya uye yainaka senyama.
Chero zvazvingaitika, zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti hapana mapfupa ehove anowanikwa mundiro. Izvo hazvirambidzwe kuwedzera hove panzvimbo pehove kana pamwe nayo
Uye pana Don, ivo vachiri kubika okroshka nezvidimbu zvehove dzakaomeswa, kana ivo vanodya hove dzakadai nekurumwa neokroshka.
Nezve okroshka yakabikwa "muunifomu" kusvikira yapfava, yatonhorera, ndokusvuurwa uye kucheka kuita mafufu. Izvo zvinonaka kwazvo kudya okroshka nekurumwa nemapatatisi akagochwa, asi ipapo uchafanirwa kurega kudya.
Hazvina kurambidzwa kuwedzera yakabikwa karoti, nyemba, munyu kana wakabikwa howa kune okroshka.
Nzira yekucheka okroshka
Kugadzirira crumb, zvigadzirwa zvakasarudzwa zvinotswanywa kuita madiki machubhu kana kutemwa kuita zvidimbu zvidiki, sezvaunoda.
Mumwe munhu anofarira zvidimbu zvidiki, mumwe mudiki, asi kukwenya chigadzirwa chakabatanidzwa muokroshka pane grater kutsamwa padhishi.
Zvirinani kupedza imwe nguva, asi ita zvese nemazvo. Izvo zvinodikanwa kuti zvigadzirwa zvakanaka uye zvakaenzana zvakatemwa, ipapo ndiro yakapedzwa ichave nechitarisiko chinoyevedza.
Okroshka mvura base
Saka, yakagadzirira zvishoma. Ungazadza sei ne? Vamwe vanhu vanoseka vachidana muto wezhizha uyu "saradhi yakadirwa kvass". Asi okroshka haisi kugara ichidururwa nekvass.
Pane imwechete yakakosha mamiriro - iyo mvura inofanirwa kuve neinovavira kuravira. Ndimu muto inowanzo shandiswa kuisa acidize hwaro.
Okroshka pane kvass - recipe
Kvass inogona kunzi hupfumi hwenyika yeRussia pasina kuwedzeredza. Munguva dzekutanga-shanduko, mhuri yega yega yaive neayo yavo yavo yekubheka yemhuri kvass. Kunyanya yaigadzirwa nemera uye, zvinoenderana nekuti yaive rye kana gorosi remera, rakasviba kana rakareruka, inenge chena kvass yakawanikwa. Okroshka yakabikwa pane chena kvass, yaive yakasviba uye yakapinza kupfuura rima.
Kugadzira kvass pamba hakuna kuoma zvachose nhasi. Kuti uite izvi, iwe uchazoda zvakakangwa zvakakangwa zvechingwa chena uye nhema, mbiriso yakaoma, shuga nemvura - uye mumazuva mashoma chete chinwiwa chinosimbisa chagadzirira.
Okroshka nemukaka wakasviba kana kefir - maficha ekubika
Iyi inguva yemberi vhezheni uye yakauya ichibva kumaodzanyemba kwekumaodzanyemba kweRussia. Zvigadzirwa zvemukaka zvisati zvaviriswa zvinowanzo svinudzwa nemvura yakajeka kana yemamineral mune chiyero che1: 1 kuitira kuti arege kuva akakora kudaro.
Kune maresipi ekugadzira okroshka pawhey akasara mushure mekugadzira kottage chizi, kana buttermilk inowanikwa mushure mekumhanyisa bota, asi zvinoshandiswa zvisina kuzorwa. Zvakare, huwandu hwakakura hwemukirimu wakasviba unofanirwa kuwedzerwa kune iyo whey kana buttermilk yekusimbisa.
Iyo mienzaniso yakapusa yeokroshka yakagadzirwa nemukaka unovava ndiyo inozivikanwa Bulgarian inotonhora muto Tarator nemagaka matsva uye mint mashizha uye Uzbek chalop ane akawanda epepuru basil mashizha.
Okroshka pane yakajeka kana mineral mvura
Iyi sarudzo yesarudzo yakanyanyisa, kana iwe uchida okroshka, asi hapana kvass kana kefir iri padyo. Nekudaro, kunyangwe iyo mvura inofanirwa kutanga yave yakakwenenzverwa - yakasimbiswa nekusvina muto wacho kubva pahafu yemurimu mairi.
Munguva dzekare, nekuda kweichi chinangwa, cucumber pickle kana muto wemaapuro akanyoroveswa akadururwa mairi. Vanoedza zvemazuvano vanoratidzira kusanganisa mvura nekirimu yakasviba, uye mamineral mvura ine mayonnaise
Iwe unogona kubika okroshka pane michero infusions, infusion yekombucha. Kana edza iyi sarudzo ine hutsinye: dururira doro risina simba pamusoro pechimedu. Ko okroshka inonzwika sei kunge mumashagne? Vamwe vanhu vakaravira sarudzo iyi futi.
Maitiro ekushandira okroshka patafura
Kunyangwe chiito chakadai chakareruka chine hunyengeri hwayo.
Unogona kushandira okroshka mune yakanaka tureen kana pani, senge inotonhora muto. Izvo zvakanaka kwazvo kana ikamisikidzwa kweinenge awa munzvimbo inotonhorera usati wadya. Mutemo uyu unonyanya kushanda kune okroshka yakabikwa mumukaka wakasviba.
Mune yechipiri vhezheni, ivo vanoshandira zvakapwanyika mundiro ye saladhi, uye kwairi kvass muvhu rakaisvonaka kana girazi jug. Saka munhu wese anogona kuita kuti chikafu chionda kana chakanyanya kuita sekuda kwavo.
Unogona kuenda kumberi nekuronga chikafu chakatemwa mumabhodhoro akapatsanurwa kuitira kuti munhu wese agadzire ega okroshka - nyama kana zvinomera.
Semutemo, ivo vanodya okroshka pane kvass nechingwa nhema, uye mukaka wakavira - une chena. Chingwa chinotapira zvirinani kana chisina kugwinyiswa muToaster.
Nzira yekuzadza okroshka
Sour cream uye yakagadzirira-yakagadzirwa masardard kana inonaka mayonnaise inofanira kunge iri patafura. Kana iwe uchida, iwe unogona kusiyanisa iyo yekuisa nekuisa mbiya ne grated horseradish kana yakakoswa radish.
Kana mustard ichifamba zvakanaka nezvose kvass uye kefir, saka horseradish inowedzerwa chete kune okroshka pane kvass.
Kugamuchira zvekudya. Radishi yakagara ichidyiwa ne kvass muRussia, uye kuitira kuti ibvise kushushikana kwayo, iyo yakatemwa midzi miriwo inoiswa mufiriji ingangoita hafu yeawa usati washumira.
Zvisina kujairika okroshka mapepa
Yakatanga kupihwa mumatavern eRussia pakati pezana regumi nemapfumbamwe century. Nekudaro, kweanopfuura mazana maviri emakore, vanhu vakawira murudo neokroshka zvakanyanya zvekuti havazi kuneta nekuuya neakawanda uye akawanda mitsva yekubikisa uye misiyano. Chimwe chinhu chinonakidza iwe unogona kuyedza, kuongorora, kutora.
Okroshka pane muto wedomasi
Panzvimbo pekvass, muto wedomasi wakasanganiswa nemagaka kana matomatisi, muto wemonimu uye madonhwe mashoma eTabasco muto kana pini yepepuru tsvuku inowedzerwa kunhuwirira. Zvingangodaro, munyori wepfungwa akafuridzirwa neSpanish inotonhora tomato muto gazpacho.
Okroshka munyama muto
Iyi yekubheka haisi nzira yakaderera-macalorie, asi iwe unogona kuyeuka kuti munguva pfupi yapfuura vanachiremba vakakurudzira kusanganisira muto wehuku mukudya kwevanopora. Mune zviitiko zvakakosha, kana iwe uchida kusimbisa zvakanyanya simba rako, nzira yakadaro yeokroshka ichauya zvakare inobatsira.
Iyo muto wakatonhora, wakabikwa kubva kune yakaonda nyama, inofanirwa kudirwa kuitira kuti ubvise madonhwe machena emafuta echando kubva pamusoro. Wedzera muto wemonimu, shuga shoma uye masitadhi mairi uye uishandise pane kvass yekugadzira okroshka. Uye kuti iitwe kunyange inonaka uye inogutsa, inotangwazve kusanganiswa nemayonnaise. Ehezve, iyi yekubheka haisi yemunhu wese.
Yakakura okroshka pane kefir negariki
Iyo yekubheka inonakidza kwazvo seti yezvigadzirwa. Inosanganisira bhero mhiripiri, matomatisi, magaka, letisi uye hanyanisi. Iwe pachako gadzirira kupfeka kweokroshka kubva pakapwanyika gariki, mayonnaise, muto wemonimu uye munyu uye wobva wawedzera kune iyo crumb. Sakanidza zvese uye udururire mune undiluted kefir. Inofanira kunge iri gobvu.
Dagestan okroshka negwayana rakabikwa - recipe
Zvirokwazvo magaka ane michero mirefu (pane aya marudzi esaradhi) nedhiri. Iyo peculiarity ndeyekuti zvigadzirwa zvakatemwa zveokroshka zvinoiswa mumukaka wakakomberedzwa wakasanganiswa nemvura (1: 1), uye kwete zvinopesana. Zvichida kuteedzana uku kunokanganisawo kuravira kwedhishi? Zvakakosha kuyedza ichi neicho.
Izvozvo zvakatanga sei
Uye okroshka yakatanga ne turi - chikafu chakaderera chevarombo. Iyo yekubheka yakachengetedzwa uye iwe unogona kuyedza kuibika kunze kwekufarira kusvika nhasi. Kune izvi, zvidimbu zvakaomeswa zvechingwa nhema zvinokwizwa negariki uye zvochekwa kuita madiki machubhu. Wedzera magaka matsva akachekwa, zvishoma zvakapwanyika girini hanyanisi nemunyu uye yakakoswa horseradish midzi Dururira zvese pamusoro nehupuni yemafuta emiriwo uye sanganisa. Dururira crumbly, hongu, ne kvass. "Sechingwa uye kvass, saka zvese zviripo nesu" - zvaive zvisiri zvechinhu kuti chirevo ichi chaishandiswa muRussia.
Ndiro yakafanana yakawanikwa pakati pevanhu vekumaodzanyemba. Aya ndiwo magadzirirwo ejeri muchiArmenian: madiki machubhu echingwa nhema nhema uye hanyanisi akachekwa anodururwa nekefir yakasanganiswa nemvura (1: 1). Zviri nyore.
Turyu inodyiwa nekukurumidza mushure mekubika, kudzamara zvidimbu zvechingwa zvanyorova kuita mushy mass.
Zviri nyore kuona kuti kumatunhu ekumaodzanyemba uye kumabvazuva inowanzo bikwa nemukaka unovava, uye muRussia - ine kvass. Asi, oddly zvakakwana, ese misiyano ane maitiro akafanana panyama yemunhu. Icho chokwadi chekuti zvigadzirwa zvemukaka zvakaviriswa zvine huwandu hukuru hwehutachiona hunobatsira zvinotaurwa zvakanyanya. Nekudaro, yakajairika Russian kvass haina kana mashoma awo.
Icho chokwadi ndechekuti chimera chinoshandiswa mukugadzirira kwayo. Chii chinonzi malt? Idzi ndidzo tsanga dzezviyo dzakamera - bhari, rye uye gorosi. Munguva yekuvirisa mbiriso muhupo hwehuga, zvakawanda zvinoteedzera zvinhu uye mavitamini, anobatsira kwazvo vanhu, anogadzirwa kubva pairi, kunyanya C uye neboka B.
Kvass iri, pasina kuwedzeredza, chinwiwa chipenyu. Iko hakuna zvinopesana pamusoro pekushandisa kwayo. Kungofanana nezvinwiwa zvemukaka zvakaviriswa, zvine pundutso pabasa remudumbu, zvakajairika metabolism uye, kazhinji, zvine simba pakusimbisa mumuviri wemunhu. Kunze kwezvo, kvass inosimbisa iyo enamel yezino. Vakadzi vane nhumbu nevana chete ndivo vanorambidzwa kuishandisa, sezvo iri yezvinwiwa zvinodhaka, kunyangwe mugove wedoro mariri uri mudiki - chete 1,2%.
Asi zvinofanirwa kuyeukwa kuti maindasitiri kvass inoitwa pasteurization uye ma microorganism anobatsira mairi, maiwe, kufa, uye chinwiwa chinorasikirwa neakawanda ekupora kwesimba. Izvo zvakakodzera kutora kuda muchibhakera, uchigadzira yako kvass - rega imire mukicheni yega yega muhari huru yemarita matatu.
Kana isu tikataura pamusoro pekoriori zvemukati zvekvass, saka ingori 27 kcal pa100 g yechigadzirwa. Iyo macalorie emukati wemukaka unovavira ingangoita zvakapetwa kaviri - 56 kcal pa100g, asi isu tinorangarira kuti pakugadzirira okroshka vanoshandisa yakakora mukaka hafu yakasanganiswa nemvura.
Iko macalorie zvemukati wakagadzirwa-wakaomeswa kudya kunonetsa kutumidza zita, nekuti zvinoenderana nezvishandiso zvinoshandiswa, kunyanya nyama. Paavhareji, iwo macalorie zvemukati echinyakare okroshka haapfuure 78 kcal pa100 g yechigadzirwa. Iyi dhishi chinhu chakanakisa chekudya kune avo vari kutsvaga kudzikira huremu.
Uye kana iwe uchifunga nezve zvese zvinobatsira zvekvass uye mukaka wakasviba, saka okroshka inongoda kuverengerwa mukudya kwako, kunyanya munguva inopisa yezhizha.
Kugamuchira zvekudya. Mukupisa, machubhu echando anowanzoiswa muokroshka; iyi dhishi ine yakanaka yekuzorodza mhedzisiro. Dzimwe nguva cranberries inoiswa mumvura kuti itonhorere, izvi zvinopa iyo dhishi piquancy yakakosha.
Yakasarudzika okroshka recipe
Ini ndinofanira kutaura kuti idyo inokodzera yekuyedza: iwe unogona kubika maviri acho, mairi musingazove nechinhu chimwe chakajairika, uye ese ari maviri achanzi okroshka!
Chekupedzisira, kamukira yeiyo classic okroshka pamunhu, kutenderedza kwaunogona kutamba, uchiwedzera kana kusanganisa zvinoriumba.
Zvishongedzo zvechinyakare okroshka:
1 mazai akaomeswa;
2 madiki matsva magaka;
hombe hombe yemadhiri, yakanaka hafu yaro ma green hanyanisi;
50g yenyama yakabikwa yakabikwa;
kvass yakakwana kuti uwane dhishi rekukora kwaunoda;
1 tbsp muto wakasviba wekupfeka.
1 tbsp muto wakasviba wekupfeka. Zvakavanzika zveichi chikafu cheRussia chinoburitswa, uye pahwaro hweruzivo rwakawanikwa, munhu wese anogona kuuya neyake okroshka, inova inodiwa yemhuri dhishi, uye mabikirwo emhuri ayo achagara nhaka. Mushure mezvose, ichi chikafu chinonaka, chine hutano uye chakasiyana.
Sopu yakaoma: mabikirwo ane mapikicha
Recipe yeakroshka nesoseji pane mvura yemaminerari
Ndeipi masobho? Mhando dzemuto
Inonaka okroshka nemombe
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,489 masekondi.